ကိုယ်ကြွေနေသူနဲ့ တစ်ပုံစံတည်း တူတဲ့ Sex Robot တွေ ဝယ်ယူနိုင်တော့မည် | Buzzy
ကိုယ်ကြွေနေသူနဲ့ တစ်ပုံစံတည်း တူတဲ့ Sex Robot တွေ ဝယ်ယူနိုင်တော့မည်
အသံကအစ တူအောင် လုပ်ပေးမှာပါတဲ့ :O
နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာခြင်းနဲ့အတူ သိပ်မကြာတော့မယ့် အနာဂတ်မှာ ကိုယ်သဘောကျတဲ့သူနဲ့ ချွတ်စွတ်တူတဲ့ စက်ရုပ်တွေ မှာယူအသုံးပြုနိုင်တော့မယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
နညျးပညာတှေ တိုးတကျလာခွငျးနဲ့အတူ သိပျမကွာတော့မယျ့ အနာဂတျမှာ ကိုယျသဘောကတြဲ့သူနဲ့ ခြှတျစှတျတူတဲ့ စကျရုပျတှေ မှာယူအသုံးပွုနိုငျတော့မယျလို့ ပညာရှငျတှကေ ဆိုပါတယျ။
သင် တိတ်တိတ်လေး ကျိတ်ကြွေနေတဲ့ သူ ၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကို ပစ်သွားတဲ့ ရည်းစားဟောင်း ၊ စသဖြင့် သင်နှစ်သက်သူနဲ့ တစ်ပုံစံတည်း အသံကအစ တူတဲ့အရုပ်တွေကို မှာယူအသုံးပြုနိုင်တေ့ာမှာပါတဲ့။
သငျ တိတျတိတျလေး ကြိတျကွှနေတေဲ့ သူ ၊ ဒါမှမဟုတျ သငျ့ကို ပဈသှားတဲ့ ရညျးစားဟောငျး ၊ စသဖွငျ့ သငျနှဈသကျသူနဲ့ တဈပုံစံတညျး အသံကအစ တူတဲ့အရုပျတှကေို မှာယူအသုံးပွုနိုငျတေ့ာမှာပါတဲ့။
တူညီမှုအရာမှာဆိုရင်လည်း ၊ ရုပ်ရည်သာမက ခန္တာကိုယ်အချိုးအစား နဲ့ အသံကအစ တုပပေးနိုင်တော့မှာလို့ ဆိုပါတယ်။ အရုပ်ရဲ. ကွာလတီဟာဆိုရင်လည်း လူသားနဲ့ မခြားအောင် စီမံနိုင်တော့မှာပါ။ ဒီလိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံပဲ ထောက်ပံပေးဖို့ လိုမှာပါတဲ့။
တူညီမှုအရာမှာဆိုရငျလညျး ၊ ရုပျရညျသာမက ခန်တာကိုယျအခြိုးအစား နဲ့ အသံကအစ တုပပေးနိုငျတော့မှာလို့ ဆိုပါတယျ။ အရုပျရဲ. ကှာလတီဟာဆိုရငျလညျး လူသားနဲ့ မခွားအောငျ စီမံနိုငျတော့မှာပါ။ ဒီလိုဖနျတီးနိုငျဖို့ ဓါတျပုံတဈပုံပဲ ထောကျပံပေးဖို့ လိုမှာပါတဲ့။